IOS 13.7 ngoku iyafumaneka ngesazisi esitsha sokuBhengeza | IPhone iindaba
IOS 13.7 ngoku iyafumaneka ngesaziso esitsha sokubonisa okucacileyo
Ingelosi Gonzalez | | iOS 13, Izaziso
Kwiveki ephelileyo u-Apple wakhupha i-beta yokuqala ye-iOS 13.7. Izolo kusungulwe ngokusesikweni kwaye ngoku iyafumaneka kubo bonke abasebenzisi ngokusemthethweni. Olu hlaziyo luza njengesiphumo sokuthatha inxaxheba kancinci kwamazwe ahlukeneyo kwihlabathi ukuba bathathe inxaxheba ekwenzeni usetyenziso lokudibanisa iSaziso se-API ngokuBoniswa kukaGoogle kunye neApple ngokuchasene ne-COVID-19. Ngenxa yoku, ezi ngxilimbela zimbini zobuchwephesha zehla zaya kwishishini kwaye zenza inkqubo ebizwa Isaziso ngokuBonisa ngokuBonisa, uguqulelo olusisiseko lokulandela abafowunelwa ngaphandle kwemfuneko yesicelo kulawo mazwe angenayo iapp.
Hlaziya isixhobo sakho kuhlobo olutsha lwe-iOS 13.7 ngoku
IOS 13.7 ikuvumela ukuba wenze isebenze kwinkqubo ye-COVID-19 yokwazisa ngaphandle kokukhuphela nayiphi na usetyenziso. Ukufumaneka kwenkqubo kuxhomekeke ekubeni igunya lezempilo loluntu kwingingqi yakho liyayixhasa le nkonzo. Le nguqulo ikwabandakanya nolunye ulungiso lwebug kwi-iPhone.
Olu hlaziyo lutsha lubandakanya kuphela inkqubo ebalulekileyo ebhaptiziweyo njenge Isaziso sokubonisa ngokucacileyo. Le nkqubo ijolise kula mazwe angekasenzi sicelo sokudibanisa i-API ekhankanywe apha ngasentla. Ngale nkqubo intsha, siza kuvumela abasebenzisi ukuba balandelele abo banxibelelana nabo kwaye banike ingxelo ngezinto ezintle zabo. ngaphandle kokuba neapp njengabaseSpain sineRADV COVID.
Kwiseto se-API Isaziso ngokuBonakalisa siza kubona lo msebenzi mtsha sinokuwenza emva kokujonga ukuba ilizwe lethu liyahambelana nalo. Ukuba ilizwe lethu linesicelo salo, siya kuthunyelwa kwiVenkile ye App ukuze siyikhuphele. Ngaphandle koko, ungaqala ukusebenzisa le nkqubo intsha kwangoko.
IOS 13.7 ikwabandakanya uyilo ngokutsha lwecandelo elinikezelwe kwiSaziso sokuBonisa kuseto lwe-iPhone yethu. Nje ukuba ngaphakathi, into yokuqala esinokuyenza kukujonga ukuboniswa okuvela kwi-app esiyifakileyo. Emva koko, siza kubona ukuba senze okanye asisebenzi irekhodi lokuvezwa kwaye sikummandla esikuphi. Singabelana ke ngesifo esichanekileyo se-COVID-19 esihambisa ngokuzenzekelayo kwi-app esiyifakileyo.
Okokugqibela, sinokumisela ukuba sifuna ukufumana isaziso senyanga nesishwankathelo semiboniso yethu kwaye ukuba sifuna ukufumana izaziso zokufumaneka kommandla esikulo ukutshintsha inkqubo yemiboniso ngokuxhomekeke kwilizwe, kurhulumente okanye kwingingqi esikuyo phakathi. Ngoku ungahlaziya ku-iOS 13.7 useto lwesixhobo sakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 13 » IOS 13.7 ngoku iyafumaneka ngesaziso esitsha sokubonisa okucacileyo
U-Eliseo Soriano sitsho
Molo, ndihlaziye inkqubo kwinguqulelo ye-13.7 ndihlaziye useto ekuvezeni i-covid kwi-iphone yam kodwa umbuzo wam ulandelayo, ndingasusa isicelo se-covid radar xa sisebenza kwingingqi yam kwaye ndisebenzise iapile kuphela ? okanye uzifuna zombini?
Phendula uEliseo Soriano
Ingelosi Gonzalez sitsho
Molo uEliseo, osuka kwi-iPhone eyiyo sincoma ukuba ufake i-COVID radar. I-iOS 13.7 iphucula inkqubo yokwazisa ngokuchasene nala mazwe apho angenazicelo zawo kusetyenziswa inkqubo yokubonisa entsha. Ke, sicebisa ukuba ufake usetyenziso lukarhulumente RAdar COVID.
Phendula u-Ángel González
I-Apple isungula i-beta yesixhenxe ye-watchOS 7 ngaphandle kwe-beta entsha ye-iOS 14
I-Apple TV + isasaza iKrisimesi ekhethekileyo noMariah Carey